Shiinaha Mashiinka alxanka mashiinka alwaaxda shiinaha Shiinaha Soo saare iyo Badeecad | Qorrax dhaca
Mashiinka alxanka kaalinta laser Jewelry
Mashiinka alaabada alxanka laysku qurxiyo ee horudhaca ah:
Mashiinkaan waxaa si gaar ah loogu talagalay dahabka iyo alaabada kale ee birta yar yar ee alxanka laser, oo inta badan loo isticmaalo alxanka barta biraha kala duwan.
Alxanka kaalinta laser waa arrin muhiim u ah farsamada wax soo saarka laser, mid ka mid ah habka barta alxanka waa kaamerada kuleylka, ie dusha kuleylka shucaaca laser, kuleylka dusha sare ee ku faafidda gudaha kuleylka kuleylka, iyadoo la xakameynayo ballaca garaaca wadnaha, tamarta, awoodda ugu sarraysa iyo soo noqnoqoshada soo noqnoqda, xuduudaha sida dhalaalka qaybaha, si loo sameeyo barkad dhalaal ah oo gaar ah.
Faa'iidooyinkeeda gaarka ah awgood, waxaa si guul leh loogu isticmaalay dahabka iyo qalinka lagu farsameeyo qurxinta iyo alxanka qaybaha yaryar iyo kuwa yaryar.
Mabda'a shaqada ee nidaamka alxamida dhigaalka laser-ka ayaa ah tikniyoolajiyadda alxanka oo leh tamar kulul oo heer sare ah iyo barta dhexe, taas oo si wax ku ool ah ula macaamili karta alxanka iyo dayactirka dhammaan qeybaha yaryar, isla markaana u hagaajin kara yaraanta tikniyoolajiyadda alxanka argon ee soo jireenka ah. alxanka dusha sare.
Labada dariiqo ee cadaadiska kuleylka iyo daaweynta kadib waa laga fogaadaa, taas oo si weyn u badbaadisa wareegga wax soo saarka ee caaryada.
Alxanka kaalinta Laser waxaa inta badan loo isticmaalaa buuxinta godka iyo alxanka kaalinta dahab iyo dahab qurxinta, iyo sidoo kale loo isticmaali karaa alxanka qabow ee steel daawaha sare, been abuurtay kulul daawaha sare, steel qalab nickel, steel darajo sare, daawaha copper, beryllium copper , Aluminium adag oo adag, dahab, qalin iyo qalab kale oo bir ah.
SUNTOP Mashiinka Mashiinka Mashiinka alxanka laser Sifooyinka astaamaha ugu muhiimsan:
Mashiinka oo dhan waa la dhigi karaa desktop, naqshad biyo-qaboojiye lagu dhisay, meel yar.
Tamarta, balaca garaaca wadnaha, soo noqnoqoshada, cabirka dhibcaha waxaa lagu hagaajin karaa noocyo kala duwan, si loo gaaro noocyo kala duwan oo saameyn alxanka ah.
Xuduudaha waxaa lagu hagaajiyaa usha xakamaynta ee daloolka xiran, taas oo fudud oo wax ku ool ah.
Isticmaalka daloolka dhoobada dhoobada dhoofinta ee Britain laga keenay, caabbinta daxalka, iska caabinta heerkulka sare, waxtarka sare ee isbadalka sawir qaade, isku soo ururaya nolosha daloolka (8-10 sano), nolosha laambada xenon in ka badan 8 milyan oo jeer.
Daboolka u dhigma, baabi'inta kicinta indhaha waqtiga shaqada.
Iyada oo leh 24 saacadood oo awood shaqo oo joogto ah, waxqabadka mashiinka oo dhan waa xasilloon yahay.
Naqshadaynta bini-aadamka, ergonomiga, saacadaha shaqada ee dheer oo aan daal lahayn.
Faa'iidooyinka ugu weyn: xawaaraha degdegga ah, waxtarka sare, qoto dheer, cillad yar, aagga kuleylka yar yar, tayada alxanka sare, wasakh la'aanta, waxtarka sare iyo ilaalinta deegaanka.
Xuduudaha ugu muhiimsan ee mashiinka alxanka laser kaalinta kaalinta dahabka:
Ugu badnaan awood laser 150W
Wadarta isticmaalka tamarta 5KW
Laser diirada 110mm
Soo noqnoqodka garaaca wadnaha ≤0.1-20Hz
Ilaalinta TM 10-30 darajo
Ballaca garaaca wadnaha ≤20ms
Gaas gaaska ilaaliya 1 waddo
Koronto 220V / 50Hz / 20A
Cabbir 900 * 500 * 600mm
Miisaanka saafiga ah ee mashiinka 80KG
Sawirada muunadda alxanka dhabta ah ee laysku qurxiyo ee tixraaca ah:
Hore: Gacanta qabtay mashiinka alxanka fiber laser
Xiga: Mashiinka goynta laser-ka iyo CO2
Pipe Fiber Laser magaabay, Mashiinka Goynta Laser Fiber, Tuujiye Laser, Mashiinka Goynta Tube Fiber, Shiinaha Fiber Laser Goynta Machine, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Fiber Laser,